Keep Nọgide Na-eji Okwu ahụ "Ihe Ekike" ... | Martech Zone
Robert Half Technology na Group Creative bipụtara ọmụmụ na infographic, Mgbasa Ozi Digital, ebe 4 na 10 CIO na-ekwu na ụlọ ọrụ ha enweghị nkwado dị mkpa maka ọrụ azụmaahịa dijitalụ.
Ọ bụ ezie na enweghị m obi abụọ na nke ahụ bụ eziokwu, ọmụmụ ihe ahụ mebiri ụfọdụ data n'ime bọket abụọ, Ndị isi IT na ndị isi okike. Amaghị m na m kwenyere na enwere ụdị mmekọrịta dị n'etiti ịbụ onye IT ma ọ bụ ịbụ onye okike. Na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ a ruo afọ 25, ezutewo m ụfọdụ usoro dị ịtụnanya, ndị na-eche nche, ndị isi IT na-ahụkarị ihe okike.
Keep na-eji okwu ahụ eme ihe, echeghị m na ọ pụtara ihe ị chere na ọ pụtara.
Inigo Montoya si The Nwunye Adiaha
Ndị mmadụ na-akwụ m mgbe ụfọdụ otito nke imepụta ihe. Ekwetaghị m na m bụ. Amaara m ọtụtụ ihe okike ma were ike ha chee echiche banyere ihe okike maka nsogbu siri ike. Nke a apụtaghị na anaghị m eme nke ọma, n'agbanyeghị. Agbanyeghị, ụzọ m si eweta azịza adịghị agabiga creativity, ọ bụ site na mkpebi. Ewuru m aha na ịchọpụta otu esi eme ka ụlọ ọrụ ọ bụla rụọ ọrụ.
Enwere ọtụtụ ihe atụ dị ka nke a na akụkọ ntolite. Ọtụtụ ndị na-aga nke ọma ga-agwa gị na ọ bụghị ikike ha iwepụta nnukwu azịza, ọ bụ na ha na-edozi nsogbu ma na-arụ ọrụ site na ndapụta ugboro ugboro ruo mgbe ha wetara azịza. Ọtụtụ oge, ihe ngwọta ndị ahụ na-abịa site n'inwe netwọkụ siri ike ma mara nke ọma. Mgbe anyị zutere otu, ọ na-atụ anyị n'anya mgbe niile ka anyị si erute okike azịza ya. Anyị kere ihe? Ka ọ bụ naanị ngwakọta akụ na ụba nyere ihe kwesịrị ekwesị maka ịmepụta ihe ga-ebili? Eche m na ọ bụ nke ikpeazụ.
Obi dị m ụtọ na ịnọgidesi ike bụ nnukwu ihe a ga-eji dochie anya talent.
Steve Martin, Amuru Iguzo ọtọ: Ndụ Nke Onye
Ọtụtụ afọ gara aga, a gwara m na e nwere ụdị ndị ọrụ atọ, ndị na-ebuli elu, ndị na-ebu ihe na ndị na-akụ ọkpọ. Fọdụ ụlọ ọrụ kwenyere na ọ dị oke mkpa na ha nwere ndị na - ebuli ya elu - ndị na - echepụta ihe na - enye azịza ma ọ bụ echiche ọhụụ ọhụụ. Ndị a nwere ike ịbụ ihe okike. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na - ewepụta echiche ọhụụ mgbe niile, ị nweghị ego ịchọrọ iji guzobe azịza na usoro dị mkpa ka ekwupụta ma tinye n'ọrụ.
Inwe ndị isi na-adọta ndị otu ahụ ka ha nwee ihe mgbaru ọsọ ma nwee ndị na-akwọ ụgbọala ha na-aga ebe ahụ dịkwa mkpa. Yabụ, ịchọrọ n'ezie ndị isi okike? Ma ọ bụ ị chọrọ nchikota ndị isi na-aga ebuli, dọpụta ma kwalite ọrụ n'ihu ka ụlọ ọrụ wee nwee ike ịghọta ọhụụ ya? Iguzosi ike n'ezi ihe na-eme ka m nwee ike ịme ntuli aka kwa ụbọchị.
Tags: mụrụ guzo ọtọihe okikendị isi okikecreativityọrụozi teknụzụInigo Montoyaitọ Executiveya na ihe okikeLeadershipbulie elunnọgidesi ikePrincess Nwunye DiDọọKwaarobert ọkararobert ọkara teknụzụSteve Martintalentotu ndi okike
Gịnị bụ Netnography?